Khilaaf ka taagan wali soo xulista xubnaha ka dhiman aqalka sare ee gobolka W/qooyi |
Khilaaf ka taagan wali soo xulista xubnaha ka dhiman aqalka sare ee gobolka W/qooyi
Muqdisho (estvlive) 15/01/2017
Guddoomiyaha guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada W/qooyi Jaamac Max’ed Khalaab ayaa faahin dheeraad ah ka bixiyay sababta keentay in hakiyo soo xulista xubnaha ka dhiman aqalka sare ee gobollada W/qooyi.
Jaamac Max’ed Qaalib ayaa sheegay in khilaafku yahay mid salka ku haya doorashada ama soo xulista shanta karsi ee ka dhiman xubnaha aqalka oo beelaha dhaxdooda ay isku heystaan, isaga oo intaa ku darran in lagu guda-jiro xilinta khilaafkaas.
‘’ Khilaafka waxaa uu ka dhashay in qaar ka mid ah beelaha kuraasta ka helay gollaha shacabka doonayaan in sidoo kale ay u tartaan aqalka sare, taasoo beelaha qaar ay ka biyo –diideen arintaa ayaa sabab u ah in la hakiyo doorashada shanta kursi ee dhiman’’ ayuu yiri Jaamac Max’ed Qaalib.
Waxaa uu sheegay in uu ku rajo weyn yahay in doorashada dib uga bilaaban doonto magaalada Muqdisho marka la xaliyo sida uu hadalka u dhigay khilaafka jira. Ugu danbeyntii, guud ahaan marka la eego doorashada xildhibaannada labada aqal ee gobollada W/qooyi ayaa mudo dheerba soo jiitameysay waxaa hareeyay khilaaf ka dhax aloosan beellaha gobollada W/qooyi ee kuraasta ku tartamaya.